Ny raharaham-pikarohana teny | Martech Zone
izany is Lahatsoratra iray tohana. Miakatra avo dia avo ny lanjan'ny milina fikarohana, tsy mahagaga raha mipoitra hatraiza hatraiza amin'ny Internet ny fitaovan'ny fikarohana. Mampiasa aho WordTracker ao amin'ny bilaogiko, satria tsotra fotsiny satria manana plugin mora ampiasaina izy amin'ny fitadiavana ireo tag tsara indrindra ho an'ny hafatrao tsirairay.
Fantatro fa ny SEOmoz dia manana teny fanalahidy vitsivitsy sy fehezanteny manan-danja ao anatin'ny firaketana atiny premium, tsy azoko atao ny manamarina ny fandaniana amin'ny $ 49 isam-bolana ao amin'ny bilaogiko kely.
Wordze nangataka ny hanaovako bilaogy tohana amin'izy ireo ary nahaliana ahy ny hianatra bebe kokoa momba an'ity orinasa ity. Wordze dia manana fonosana famandrihana $ 45 isam-bolana ary toa manana fanangonana fitaovana matanjaka indrindra izay hitako momba ny Fikarohana Keyword:
Ity misy lisitr'ireo fiasa sy fitaovana ho hitanao ao amin'ny Wordze:
Keyword Research Tool - motera ity ahafahanao mampiditra teny sy andian-teny ary miverina miaraka amin'ny tantara, indexing, laharana, isa ary maro hafa Analytics fitaovana mifandray amin'ilay andian-teny sy andian-teny hafa toa azy.
Manafatra teny lakile - raha toa ka mpomba ny raharaham-barotra ianao, dia mety nahavita fikarohana momba ny teny lakile taloha. Ny Wordze dia nanamora ny fampidiranao ny teny lakile hafao amin'ny rafitr'izy ireo.
Valiny misintona - manazava ny tena.
Keyword API - Mahery vaika io API hampidirina Wordze ao amin'ny rafitra fitantanana atiny na fampiharana anao. Tena liana amin'ity aho - tiako ny mahita olona mampiditra mpampanonta izay mampiditra ny sosokevitra fanalahidy rehefa manoratra ianao.
Keyword Misspellings - Tetik'ady tsy raharahabahana io. Raha nasiako marika ny tranokalako tamin'ny 'bilaogy teknolojia marketig'ary'bilaogy tecnology marketing'na marketig sy tecnology fotsiny dia betsaka kokoa, azoko atao ny misambotra fifamoivoizana lehibe izay mety tsy raharahain'ny tranonkala hafa!
Fikarohana teny lakilika ara-tantara - fijery mahaliana amin'ny fironana teny lakile sy andian-teny.
Search Engine Research - fitaovana lehibe handavaka lalindalina kokoa ny valin'ny motera fikarohana ary hahitana izay vohikala hafa nohamarinina.
Tetikasa - raha manao fikarohana amin'ny tetikasa marobe ianao, mamela anao handamina ny teny lakileo ho lasa tetikasa ny fidirana haingana amin'ny fitaovana tsirairay.
Fanamarinana tranokala - fitaovana tena milay ahafahanao mampiditra URL ho an'ny pejy iray ary mahazo tatitra miverina amin'ny teny lakile sy andian-teny rehetra, ary koa ny fahaizana mandavaka lalindalina kokoa ho an'ny tsirairay mba hadihadiana bebe kokoa.
Thesaurus - Wordze koa dia manana thesaurus mahery vaika ahafahanao mametaka teny lakile ary mamerina teny fanalahidy fanampiny hampiasana anao, mora raisina raha te-hamboatra atiny voavolavola ianao handroahana ny Fikarohana.
Fanamarinana WordRank - fantaro hoe iza no tompon'ny teny fanalahidy tadiavinao.
Fampidinana - ny fahaizana mamoaka ny fikarohana ny teny lakile nataonao rehetra.
FAQ - Fanontaniana napetraka matetika - io lanja io dia volamena, ity pejy ity dia mamaly ny fanontaniana rehetra mety hanananao momba ny Keyword Research.
Horonan-tsary - tsy tia mamaky? Ireo olona ireo aza dia namoaka horonan-tsary tamin'ny fitaovany rehetra sy ny fomba fampiasana azy ireo tanteraka!
Ary mazava ho azy, Wordze dia manolotra programa Affiliate!
Raha ny fiheverako ny fanetren-tena, ny endri-javatra mahafinaritra indrindra an'ny Wordze dia ny fandaminana fitaovana sy ny fahatsorana amin'ny fitadiavana sy fampiasana izany. Tsy dia tsara tarehy toy ny sasany amin'ireo fitaovana hafa any io, saingy tsy mila izany - fikarohana teny ho an'ny fahatsarana izany!
Inona no azon'ny Wordze ampiasaina? Ny fitaovana rehetra dia mijanona tsara - tsindrio, avoaho, kitiho, avoaho. Tena tiako ny mahita ny fahaizana mandamina grid ary mamorona tabilao ary manivana ireo lisitra. Ohatra, raha manana drive keyword aho izay nanomboka ny 15 martsa dia te-hanao fandalinana aho alohan'ny 15 martsa sy ny 15 martsa amin'ny fanadihadihana sy tabilao rehetra.
Tags: google webmastermavenlinkpagemodofitantanana tetik'asavalin'ny media sosialyfitantanana asamanaoto-hanao-listtpiazzawunderlist
6 Feb 2008 tamin'ny 11:53 maraina
Izaho dia nampiasa Wordze tamin'ny zavatra iray na hafa nandritra ny 6 volana teo ho eo. Hitako fa tena ilaina izany ary mifanaraka amin'ny fo manontolo koa ny hevitrareo.
6 Mey 2008 tamin'ny 1:45 hariva
Fa maninona no tsy avelanao hiditra ao amin'ireto miafina ireto aho, Julie? 🙂
7 Mey 2008 tamin'ny 9:21 hariva
Fampahalalana tsara amin'ity lahatsoratra ity. Vao mianatra momba ny fanarahana ny teny lakile sy ny SEO aho. Nanontany tena ve hoe aiza no ahitana an'ity plugin ity ho an'ny Wordtracker, ary ohatrinona izany? Misaotra.
7 Mey 2008 tamin'ny 9:29 hariva
Hey, azonao atao koa ny mampiasa KeywordSpy amin'ny fikarohana ny teny lakile.